r.gyi (71), ကောလိယ (55), Myint Thin Khaing, uminnaung (44), janpangyi007 (42), myo aung040 (42), zyeko, Tun Myint (40), Nay Lin Maung, ကိုကျော်, lupyogyi (38), zinlinmar (38), မြသူဇာအေး (36), myo min thant, uswehlaingoo (35), မင်းနေ (33), မင်း​နေ (33), google_gal, လာခြင်းကောင်းသော, zawmyotun (32), aungnaing (31), ဆန်းမား (31), summer (31), phyomonaung (31), zawwintun585 (31), Hein Htett (30), သောင်းထိုက်အောင် (30), itcrazy1, သူရကျော်ထားဝယ်, than zaw soe (29), mmaungbo (29), myatko296@gmail.com, zayarhtun (28), zay y htun (28), ကျော်ကြား (28), khin khin kyaw kyee (28), yai yint thu (28), အောင်ဖြိုး, phyohtet, Vannistelrooy, အောင်ဖြိုး, Aung Thet Phyo, lokasara (27), nyan lin aung (27), suesha (27), နမ်မီးဆစ် (27), ဥာဏ်လင်းဖြိုး (27), zayerphyoaung, bobo (26), သိမ့်သိမ့်သူ (26), joonboonjoovi (26), momothan (26), heinhtetsan (26), SKY FIGHTER (26), စိုင်းဖဖ, alexlay90 (25), cartoon (25), ပြုံးမောင်မောင် (25), phoepi (25), ပိုင်ထွန်း (25), ပြည့်ဖြိုးမင်း (25), rose.gi, အောင်သီဟကိုကို (23), အောင်ခိုင်(Aung Khaing), moetainm660, December Hnin (20), sawpholay (17) Birthdays
bogyoke (47),ိnaywin (47), tinaungmoe (46), khinmyoaung (45), မင်းသိုက်ထော (43), thdar77, ထင်းလင်းကျော် (39), ရဲရဲလေး (38), kotharaye, chithtoo (35), tunookhine (35), ကျော်သန့်ဇင်-ကြွက်ကလေးlilmick (34), ညီစေမင်း (32), maharpici, သဇင်နှင်း (31), htoobutterfly007, အ နိုင်, Htut Myat Khaing (30), breezes (30), kaungmalay1yout (30), Mrs.Slex (30), နူးနူးလေး (30), htay htay naing (30), wannatunw (30), myomyohtun7, ခတ္တာ, aungkoko1374, ayethwin (29), ko thu (29), saw gyi (29), ဖားကူသား (29), မုကလေး, ကျော်သီဟကို (28), ဝင်းဇော်ညွန့် (27), စန်းမြို့, လှိုင်ဟိန်း (26), ​မောင်​ပြည့်​စုံဖြိုး (26), သော်က, kaungkinthit (25), ThawWaiTun (25), nainglinnsoe (24), Kyak Paung (24), lwinnyeinn (22), pyaesoneaung93 (22), zalder (22), kingban007 (20), ကြယ်စင်ဖြူ, waiphyoetun (18) Birthdays
aat.teacher (41), စိုးရာဇာ, Tiger-kk (39), min-yan-aung, myopapakhin, ဖိုးသောက်ကြာ (35), ကျော်အေးထွန်း (35), eimyatmon007 (34), thuraminhtet (32), မောင်ထိန်လင်း (31), kglayphoekauk (30), မင်းခမောင် (29), thanlwinthar (29), kyawktun (29), wonna aung swe (29), ဒီဇင်ဘာဘွိုင်း (29), KGBagent (29), wonnashaper (29), myokowin (29), sanditintun (28), Ladykyawzaw (28), မဖြူစင်လင်း (27), ဖြူစင်လင်း (27), ချယ်လူလင်း (27), မြတ်အိဖွန်ဦး (27), pkoko88 (27), minlover111 (27), သူရိန်လင်း (26), Min Khant Kyaw (25), ထက်နေသော် (25), ကိုကျော်စိုးသက်, maynadi (24), စိုင်းသန့်ဇင်ဦး (24), ဇင်မာစိုး (24), pyit phyo (23), မိုးဝေမာန် (23), မိုးဖွဲဂျူလှိုင် (23), myat no wai (23), kwayzin (22), PhyoWaiKyaw (21), beautifulsmilekady (20), မောင်ညီရဲ, muna125 Birthdays
မောင်အာကာမင်း (61), ဦးကောက် (55), သက်နိင်ဝင်း, အောင်တင့်, အောင်တင့်ချောင်းဝ, ကိုဘကျော် (52), aung aung lin (40), tinminhtoo (37), naymyoko (37), thitsar (35), aasaung (35), winmyint (34), winniewong187, နန်းရွှန်းမှီ, ဆောင်းနှင်းဖြူ, yehtetkhaung (32), morbidangel1983 (32), ကြည်လေး (30), ခမ်းချစ်သူ၈၉ (30), ကျော်ဇ (30), hnin hnin 251 (30), kyi min tun (30), ၀င့်ဘုန်းမင်း, winnelin, ခိုင်ဆွေဆွေ, JTerry (29), ကာရံမဲ့(29), sta1986 (29), kotongzayya (29), ရဲရင့်ကိုကို (28), moezawoo (28), simpleoflife (27), Thet Aung (27), ThetAung (27), mr.vampire, ဟိန်းသီဟအောင်, myominthet.mdy@gmail.com (26), ညကြယ်စင် (24), shankglay (24), ခြူးမီမီစိုး (24), wuthmonekyaw00 (23), Yadana Oo (23), yoonyoon (23), Yoon Pann Nwe, ရန်နိုင်ကျော်, yandanabon.mdy (22), ကောင်းသန်. (21), thandarsoe (21), tc94, နိုင်ဝေဇော် (20), phyu hnin (20) Birthdays
sai Thi Ha, aungmyatwin (47), Thant Zaw (45), kyaw han (43), azlin (38), goodmoon97 (38), saw myanmar (37), ချစ်ချို (36), ရဲထွဋ်ဦး (35), winhlaing (35), အလင်းေ၇ာင် (34), မောင်ပေါက် (34), နေမူး (33), babysoccer82 (33), သီဟထွန်းလင်း (33), narnarmi, kyawzayar (31), koonthiee (31), kyawzayarkunn84 (31), kyawzayarkunn (31), ZIIZ (30), woaimeifu (30), မိုးသက်လေ (30), saizaw (30), ashin eindaka (30), aunglay, တေလေ (29), dinosore (29), din20 (29), မတ်ဒီဇင်ဘာ (29), ဟိန်းထက်စိုး (29), ရန်လင်းအောင်, အောင်ထွန်းနိုင် (28), မိုးစိမ့် (28), ဖြူဖြူချစ်ဆွေ (28), kosoegyi050 (28), ဦးမျိုးသူ (28), ရန်နိုင်လင်း (27), ကို ဇော် (27), moehtetaung (27), သန့်ဇင်လတ် (27), မောင်နေရောင်လွင် (26), eieitheint7 (26), nyintyan (26), Mi Mi (25), skyhole (25), bosein (25), ဇင်ကိုကို (24), mawi mawi, yee102643 (23), ဖိုးစွမ်း (23) Birthdays
ကိုကို မောင်, toetoewin.11, hanchitei (37), certainboy (35), မိသိန်းကျော်, ဖြိုးဇော်ဇော်, firstkissstory (34), သန်းထိုက်စိုး(ရွှေ) (34), ကောင်းကင်ကြယ်, ယောနသံ, နေမခ (32), agaglom (32), Su Myat Htwe (31), pyaephyomaung, yuwadi (30), ဟန်မယွင်း (30), hlamyokyaw (30), ရဲဝဏ (30), yelwinhtun.aln@gmail.com (30), shwenyilay (30), nwaye nwaye, ဆောင်းညကြယ်စဉ်, ဝေလင်းဇော်, ဇွဲဇာနည်, paophyuthie (29), lahyaungko (29), ပိုးဇိုင်း (29), မေဖြူစင် (29), နေလေး (29), htunyusan (29), Tharaphi Htin, ကိုမိန်နွယ် (28), စိုင်းမိသက် (28), aungthuwin (27), လရောင်လင်း, အသဲကွဲသမားလေးရင်ခွင်သစ် (26), Nyi Nyi (25), မိန်းမယူမယ် (25), Mg Nyan (25), bluerays (25), nayminnaing (25), panhaymar (24), Online Boy, HtetNaing (23), thuraim (23), tainwhatla Birthdays
ချစ်ပါနော် (53),ံHtay Htay (51), ကိုကိုကေမိုး, ကိုတိုး, စိုင်းမျိုးမြင့် (47), flowernew1990 (42), aungmyintthan (39), nwenwe76, chittoe, thandar maung (37), အေးအေးအောင် (36), ယင်ကောင် (36), ဝေခူး, ကိုတေဇာ (35), khinmoe (35), komai (35), အ့ညေအ၂၃ (35), စိုင်းငယ်လေး, sapal, ကိုနေမျိုး (34), ဆောင်းလူ (33), sayamun (33), thetzin, aungzeya, naingwin (31), ရဲလင်းနိုင် (31), bobominn (31),ဲဖြိုးဇေယျာအောင် (31), KoBoBo (31), ပြည့်စုံ, ရွှေဝါဝင်း, ဆောင်းရမီ, ကိုရန်ပိုင်စိုး, အိမို, htutmyatkhaing (30), Maung Phyo Kyaw Thu (30), phyodecember (30), မင်းနိုင် (30), zippy (30), tonegyi1 (30), စစ်နိူင် (30), nlbreak101 (30), ဖြိုးပြည့် ကို (30), Guest (30), ဖြိုးပြည့်ကို (30), အညတရ (29),့ ဝေနှင်းလေး (29), thangpi (29), ashinkusala (29), မီးမီး, maung so than (27), သူရန်မင်းသူ (27), noneipar72 (27), ဟန်.G.O (27), computerlover (27), sumayaung (27), zinnwetun, ဂွန်းဆန့်အောင်, ဖေယျု (26), zayarlin (26), zay13 (26), မိုင်ငှဲလ် (26), Yar Zar (26), mai (26), စိုင်းဝေယံ (26), မောင်ပြည့်ဖြိုး (26), La. La. (26), ဆောင်းနှင်းဖြူ (25), hninphyu61 (25), စိုင်းချစ်မင်း (25), နှလုံးသားဥယျာဉ်, heartgarden, minchitoo, ခြူးရဝေလှိုင်း, May Phyo Win (24), Sithuhein (24), Sai Nyan Linn Oo (24), ၀င်းမော်ဦး, atozgirl (22), yurikogirl (22), အောင်သက်ပိုင်ဝင်း (22),ုဝေေ၀ (22), starzinnge (22), maryar, punk0077 (21), myinzu (21), စွမ်းကမ္ဘာ (21), ko yeဲ (21), ထူးဝေလင်း Birthdays
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 02:46 AM